Goodax oo boggaadiyay isku tashiga dadka reer Beledweyne, xilli balan-qaadkii dowladda aanu fulin - Jowhar Somali Leader
Home Somali Goodax oo boggaadiyay isku tashiga dadka reer Beledweyne, xilli balan-qaadkii dowladda aanu...
Goodax oo boggaadiyay isku tashiga dadka reer Beledweyne, xilli balan-qaadkii dowladda aanu fulin
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa ku boggaadiyay dadka reer Beledweyne isku tashiga ay sameeyeen, kaddib markii ay dhowaan hirgeliyeen biyo xireen looga hortagayo fatahaada wabiga Shabelle.
Goodax ayaa bartiisa Twitter-ka ku faafiyay qoraal iyo muuqaalka Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka Beledweyne Xaaji Cusmaan Dhagaxow kaasoo sheegay in aysan soo gaarin lacagtii 500 oo kun dollarka Mareykanka ee ay dowladda Federaalka balan-qaaday, isla markaana aysan wax kaalmo ah ka geysan howsha biyo xireenka ah.
“Waxaan boggaadinayaa aadna ugu faraxsanahay in bulshada Belet-weyne ay ku taaba qaadeen mabda’a isku tashiga, si ay fatahaadaha uga difaacaan naftooda iyo hantidooda. Waxaan bulshada Belet-weyn u rajaynayaa guul, Isku-tashi iyo in talada Alla saartaan”ayuu yiri Wasiir Goodax.
Hase ahaatee dad kala duwan ayaa ka falceiyay qoraalka Wasiir Goodax, iyagoo ka dalbaday in dowladda uu ka tirsan yahay aysan wax taageero ah siin dadka reer Beledweyne, isla markaana lacagtii sanadkii hore dowladdu balan-qaaday aysan soo gaarsiin.
Dadka reer Beledweyne ayaa maalmihii u dambeeyay waday dadaalo ay uga hortagayeen fatahaada wabiga Shabelle, iyagoo sameystay biyo xireen difaac u ah fatahaada wabiga, maadaama sanadkii hore kumanaan qoys ay ku barakaceen daadadka ka dashay fatahaada oo biyo badan gudaha u soo galeen xaafadaha magaalada, waxaana fatahaadii sanadkii hore ka dhashay khasaare isugu jiray naf iyo maal.